Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Countdown hanokatra an'i Saudi Arabia ho an'ny fizahan-tany miaraka amin'ny fepetra
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Arabia Saodita dia miasa amin'ny fanokafana ny fanjakana indray. Mahatonga ny fitomboan'ny fikarohana ataon'ny orinasan-dia an-tserasera ity.
Ireo mpiasan'ny dia ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA), dia miomana amin'ny famerenan'ny Saudi Arabia ny sidina iraisampirenena.
Araka ny filazan'ny Ministeran'ny Atitany Saodita, hongotana amin'ny 17 Mey ny fandraràna ny fivezivezena ho an'ny vondrona sy mpizahatany manokana.
Sehatra famandrihana lehibe iray, nahitana fiakarana 52% amin'ny fikarohana sidina iraisam-pirenena ary fiakarana 59% amin'ny fikarohana hotely iraisam-pirenena, taorian'ny fanambarana.
Manodidina ny 25% ny mpandeha no mitady hivezivezy ao anatin'ny 15 andro sidina aorinan'ny Saodiana izay nitombo 80% ny fangatahana fikarohana nandritra io vanim-potoana io hatramin'ny andro nanambarana.
Egypt dia nitana ny laharana voalohany amin'ny lisitr'ireo toerana fitadiavana sidina, arahin'i Philippines, Maroc, Jordania ary Torkia. Nahita toeram-pialan-tsasatra vaovao nipoitra ihany koa izahay tamin'ny fisavana sidina toa an'i Maldives, Tonizia, Okraina, Gresy ary Sri Lanka.
Arabia Saodita dia isan-jato lehibe amin'ny sehatry ny fizahantany any Moyen Orient. Nizotra tsara ny areti-mandringana ny firenena, namerina ny fahatokisan'ny mpandeha.
Ireo avela handeha any Saudi Arabia dia misy ireo olom-pirenena nahazo vaksinin'ny coronavirus roa na nandalo 14 andro taorian'ny nandraisana ny fatra voalohany tamin'ny vaksinina ary koa ireo olona sitrana tamin'ny coronavirus, satria nandany enim-bolana latsaka izy ireo ny aretin'izy ireo araka ny fanamafisan'ny angona naseho tao amin'ny Tawakkalna App. Ho fanampin'ireo olom-pirenena latsaky ny 18 taona, raha toa ka asehon'izy ireo ny politikam-piantohana alohan'ny dia ankatoavin'ny Banky foibe Saudi Arabia.
Ireo mpitsangatsangana miala any Arabia Saodita dia mila mampiseho taratasy fanamarinana fanadinana PCR avy amin'ny foibem-pikarohana ekena ao amin'ny Fanjakana. Rehefa tafaverina eto an-tanindrazana izy ireo dia tsy maintsy manadio karinina mandritra ny fito andro ireo mpandeha ary manao fitiliana PCR amin'ny faran'ny herinandro.
Ny Resorts dia mitarika ny fikarohana ireo mpandeha miaraka amin'ny fitomboana 58%, arahin'ireo trano sy hotely.
Manodidina ny 68% ny mpandeha mitady sidina dia solo-tena, fianakaviana 20% ary mpivady 12%.
Saudi Arabia dia namoaka ny vaksiny COVID-19 ho an'ny mponina ao aminy. Izy io dia iray amin'ireo tranga vaovao ambany indrindra isaky ny olona any amin'ny faritra MENA.
Ny mpitsangatsangana dia mahazo toky bebe kokoa amin'ny toerana misy ny seranam-piaramanidina sy hotely mamerina ny fahatokisan-tena amin'ny dia. Miaraka amin'ny fepetra fisorohana henjana sy fepetra fiarovana izay mifanaraka amin'ny fenitra avo lenta, manantena izahay fa hisy fahasitranana maharitra ho an'ny sehatry ny fizahan-tany.